UDolly uthi amava asebenawo azokwenza i-CBD ibe yingozi kunakuqala
ULeopnardo Castro, Khama Billiat noKeagan Dolly besekwiMamelodi Sundowns
Ukudlala kukaKeagan Dolly eFrance kule minyaka embalwa edlule kumfundise izinto eziningi futhi usejahe nokuhlanganisa i-CBD. Yikho lokhu okwenza lo mdlali omusha weKaizer Chiefs abe nethemba lokuthi uzokwenza kahle kuleli qembu lakhe elihle.
Ngaphambi kokuhamba kuleli esuka kwiMamelodi Sundowns, wayedlala elihle ibhola ikakhulukazi uma eboshelwe noKhama Billiat noLeonardo Castro.
Laba badlali abathathu babekususa ukushisa futhi baze bagcina sebebizwa ngele-CBD – okuyigama elihlanganisai izibongo zabo bobathathu: Castro, Billiat noDolly.
Sebephinde bahlanga bonke futhi kwiChiefs njengoba uDolly efikele kubo oCastro noBilliat asebenesikhathi bona bekhona kuleli qembu laseNaturena.
“Ngijabule kakhulu ukuthi sengize ngafika,” kusho uDolly ngemuva kokwethulwa kwakhe ngoLwesibili ntambama. “Kuyangijabulisa ukuba lapha ngiqale impilo yami ngaphansi kweKaizer Chiefs. Sengijahe ukuhlangana nozakwethu nethimba labaqeqeshi kuqale umsebenzi.”
“Ngagcina sengidaye nezinwele zami njengoPule ngesikhathi ngidlala kwiWestbury Arsenal”
“Sisasondelene kakhulu. Besijwayele ukuxoxa mina noKhama. Kuyajabulisa ukuthi sengizophinde ngidlale eqenjini elilodwa nabo. Sasinokuzwana okuhle enkundleni ngesikhathi sidlala ndawonye kwiSundowns.
“Sesizohlanganisa esikufundile ngamunye kule minyaka embalwa edlule sihlukene bese sihlanganise into ezosiza iqembu,” kusho uDolly. IChiefs ikuqinisekisile ukuthi iyelulile ngeminyaka emibili inkontileka kaBilliat.
“Ngizizwa ngisekhaya ngoba iningi labadlali ngiyazana nabo ekhempini yeqembu lesizwe futhi lokho kuzokwenza ngisheshe ngijwayele bese sisebenza ndawonye.”
Uthe ukudlala kwiChiefs yiphupho elidala futhi uyakwazi okulindeleke kuye uma esesenkundleni egqoke imibala yaleli qembu akhule engumlandeli walo.
“Kusukela ngimncane, ubaba wangazisa ngeKaizer Chiefs. Bengingumlandeli wayo kusukela ngineminyaka emihlanu. Bengiya enkundleni ngiyobuka abadlali abafana noShoes Moshoeu, engathi angalala ngokuphumula.
“Ngangibuka oStanton Fredericks, oJabu Pule (Mahlangu) ngaze ngagcina sengidaye nezinwele zami njengoPule ngesikhathi ngidlala kwiWestbury Arsenal. Angimusha eqenjini, ngiyawazi umlando walo nokuthi yini eliyimele. Sengikulungele ukuthi ngihlangane nabanye siqale umsebenzi.”
Ubalule oNkosingiphile Ngcobo noHappy Mashiane njengabafana abancane ababona benekusasa elihle kwiChiefs nafisa ukubahlomisa ngolwazi aluqokelele eseFrance.
“Bekumnandi ngiseFrance. Ngifunde okuningi. Kube nokulibaziseka ke ngenxa yokulimala ngagcina ngingasadlali njalo. Kodwa njengomdlali ngikhulile, ngikhulile nasempilweni nje jikelele.
“Ngifunde izinto eziningi kubantu nabadlali base-Europe ekutheni babhekana kanjani nezinselelo zempilo. Manje sengiyazi okumele ngikwenze uma ngiphinda ngiba sesimweni esifanayo.
“Ukubuyela kwiChiefs kuzongisiza ukuthi ngidlulisele ulwazi nesipiliyoni engisitholile kubadlali abasebancane eqenjini. Ngike ngababuka oNgcobo noMashiane bedlala, bahle kakhulu futhi ngizosiza lapho bengidinga khona ngoba ngifunde lukhulu eFrance.”
FUNDA NALA: Ingwazi yeChiefs iyathimula ngokuzuliswa inkundla yonke kukaFrosler
Nabaqeqeshi ababasha kuDolly kwazise uke wasebenza nabo bonke kwiBafana Bafana. Udlale ngaphansi kukaStuart Baxter obeseizwa nguMolefi Ntsheki kanti uLee Baxter ubengumqeqeshi wonozinti.
Nangesikhathi sekunguNtseki umqeqeshi, ubesizwa uLee Baxter no-Arthur Zwane oseyiphini kwiChiefs. “Abaqeqeshi ngisebenzile nabo eqenjini lesizwe, bayakwazi akangakulindela kimi nami ngiyakwazi engingakulindela kubo. Umqeqeshi uMolefi saqala ukusebenza naye sisakwi-Under 23.”
IChiefs yelulele nalaba izinkontileka: Itumeleng Khune (ngeminyaka emibili), Lebogang Manyama (unyaka owodwa nombandela wokwelula ngomunye owodwa), Bernard Parker (ngonyaka), Ramahlwe Mphahlele (ngonyaka owodwa).
Previous Previous post: Unikwe ishumi uDolly kwiChiefs, isisayine no-Alexander
Next Next post: UNurkovic wasiza ekutheni iSundowns ithole unyazi olunguSafranko